ပြန်သွင်းခန့်မှန်းငွေသား - U Hton Goldsmith & Jewellery
Home » ပြန်သွင်းခန့်မှန်းငွေသား
" ပြန်သွင်းခန့်မှန်းငွေသား "
ရွှေဈေးများသည် နေ့စဉ်အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေပါသဖြင့် ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းများသည် ခန့်မှန်းဈေးသာဖြစ်ပါသည်။ ရွှေဈေးအတက်အကျနှင့် ရွှေပိုရွှေလိုများ ရှိနိုင်သဖြင့် အရှိအလေးချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ပြန်သွင်းဈေး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။
ရွှေသားထည် / ကျောက်သားထည်?
ဆိုင်ရွှေ / ပြင်ပရွှေ?
ဆိုင်အထည် / ပြင်ပအထည်?
Please select24k ( ၁၆ ပဲရည်)23k (၁၅ ပဲရည်)22k ( ၁၄ ပဲ ၂ပြားရည်)18k
* English စာသားဖြင့်သာ ထည့်သွင်းပေးပါရန်။*
" ယခုစျေးနှုန်းမှာ ခန့်မှန်းစျေးနှုန်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ရွှေစျေးအတက်အကျနှင့် ရွှေပိုရွှေလို အရှိအလေးချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး ပြန်သွင်းစျေး အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါသည်။ "
" ပြန်လဲ ၊ ပြန်သွင်း လက်မခံသေးပါ။ သို့သော် ဆိုင်ထည်နှင့်ပြန်လဲမည်ဆိုပါက ဆိုင်သို့ပြင်ပရွှေထည် ယူလာပြီးစျေးဖြတ်ပေးပါမည်။ အလျော့တွက် အသက်သာဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ "
" ကျောက်တန်ဖိုးအား ဆိုင်မှတွက်ချက်ပြီး သတ်မှတ်ပေးပါမည်။ "
" မျိုးစေ့မှသည်အပင်ကြီးသို့ဖြစ်နိုင်သော်လည်း ရံဖန်ရံခါ အခက်အခဲများစွာကြုံလင့်ကစား ပြန်သွင်းပြန်လဲမေတ္တာထား၍ စေတနာအမှန်ဖြင့် ဦးထုံရွှေပန်းထိမ်မိသားစုမှနောက်မျိုးစေ့မှသည်ရွှေပဒေသာပင်ကြီးသို့စိုက်ထူနိုင်ပြီးစီးပွားတိုးကာဘဝ၌အောင်မြင်မှုများစွာရပါစေကြောင်းရင်တွင်းမေတ္တာဖြင့်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ "
Latest Gold Price (24K)
Kyauk Latest Gold Price (24K)
Latest Gold Price (23K)
Kyauk Latest Gold Price (23K)
Latest Gold Price (22K)
Kyauk Latest Gold Price (22K)
Latest Gold Price (18K)
Kyauk Latest Gold Price (18K)
ရွှေဈေးများ နေ့စဉ်အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေပါသဖြင့် ယခုဖော်ပြပါဈေးသည် ခန့်မှန်းဈေးသာဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူထားသောရွှေကို အရှိရွှေချိန်အတိုင်းသာ ပြန်ဝယ်ပေးပါသည်။ Website မှာရှိသော ရွှေဈေးသည် ယေဘုယျရွှေဈေးကွက်မှရွှေဈေး ဖြစ်သောကြောင့် ပြန်လာသွင်းတဲ့အချိန် ဈေးနဲ့ ကွာဟမှုများရှိနိုင်ပါသည်။
ကျောက်သားထည်များကို ကျောက်မှာပါတဲ့ ရွှေတန်ဖိုးကိုပဲတွက်ပေးထားပါသည်။ ကျောက်တန်ဖိုးအား ဆိုင်မှတွက်ချက်ပြီး သတ်မှတ်ပေးပါမည်။ ရွှေဈေးများ နေ့စဉ်အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေပါသဖြင့် ယခုဖော်ပြပါဈေးသည် ခန့်မှန်းဈေးသာဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူထားသောရွှေကို အရှိရွှေချိန်အတိုင်းသာ ပြန်ဝယ်ပေးပါသည်။ Website မှာရှိသော ရွှေဈေးသည် ယေဘုယျရွှေဈေးကွက်မှရွှေဈေး ဖြစ်သောကြောင့် ပြန်လာသွင်းတဲ့အချိန် ဈေးနဲ့ ကွာဟမှုများရှိနိုင်ပါသည်။